Cloud MOLOCO: Xogta-Wada, Xalalka Xayeysiiska ee Awoodda leh ee AI-ku-shaqeeya ee Barnaamijyada Moobilka | Martech Zone
MOLOCO Cloud waa madal iibsi otomaatig ah oo loogu talagalay kaydinta xayeysiiska guud ahaan barnaamijyada is-weydaarsiga barnaamijyada adduunka iyo shabakadaha xayeysiiska ah. Hadda waxaa loo heli karaa iyada oo loo marayo madal daruur ku saleysan dhammaan suuqleyda barnaamijyada, MOLOCO Cloud waxaa ku shaqeeya teknolojiyad barasho mashiin gaar ah oo awood u siineysa suuqleyda moobiillada in ay ka faa'iideystaan ​​xogta kooxda koowaad iyo calaamadaha macnaha guud ee ka jira nidaamka deegaanka si ay si toos ah ugu hagaajiyaan ololeyaasha xayeysiinta ee ku saleysan noocyo kala duwan qiyaasta waxqabadka.
MOLOCO Waxyaabaha daruuriga ah ku dar
bedasha - gaadho is-weydaarsiga xayeysiiska moobiilka oo ay ku jiraan MoPub (shirkad Twitter ah), Fyber, Vungle, AdColony, Chartboost, Tapjoy, LINE, iyo inbadan.
Kordhinta Bid - qalab cusub oo si otomaatig ah u hagaajiya xaddiga dalabyada ee xaraashka qiimaha ugu horreeya isla waqtiga dhabta ah si xayeysiiyayaashu u gaaraan himilooyinkooda iyagoo hubinaya inaysan lacag badan bixin.
Dalabyada Barnaamijyada - si otomaatig ah ayuu u habiyaa si loo kordhiyo qasabadaha, beddelaadyada, rakibidda, dhacdooyinka barnaamijka, ku noqoshada kharashka xayeysiinta, ama yoolalka kale ee uu xayeysiiyuhu dejiyo.
Xaddid Bartilmaameedka Xayeysiinta (LAT) - u oggolaanshaha suuqleyda inay bartilmaameedsadaan macruufka iyo aaladaha Android-ka ee awood u siiyay LAT, in kasta oo xaqiiqda ah in aan la haynin xog raadraac xayeysiis ah. Tilmaantu waxay ku shaqeysaa iyada oo la beegsanayo adeegsadayaasha iyadoo lagu saleynayo calaamadaha macnaha guud ee ka imanaya kalfadhiga barnaamijka hadda jira, xaaladda aaladda, xogta heer-app ee hodanka ah, iyo cabbirada kale, kuwaas oo lagu heli karo iskaashi lala yeesho ilaha saadka SDK ku saleysan sida Fyber. LAT Tracking waxay u suurta galisaa suuqleyda inay sii wadaan waxqabadka xitaa ka dib markii Apple ay sameyso aqoonsi u gaar ah xayeysiistayaasha (IDFA) ka-doorbid halkii aad ka bixi lahayd isticmaalayaasha.
Cloud MOLOCO wuxuu u suurta galiyaa suuqleyda moobiillada inay tilmaamaan dhagaystayaasha ay u badan tahay inay u kaxeeyaan soo noqoshadooda ganacsigooda guud ahaan shabakadaha xayeysiiska ee ugu sarreeya adduunka, iyo suuqyada:
Kordhi fariintaada guud ahaan 2.5 milyan oo barnaamijyada moobiilka ah
Gaadho in kabadan 4 bilyan aaladaha caalamiga ah isla markaana kobci saldhig tayo leh
Hesho adeegsadayaasha, dib-u-habeynta, dib-u-hawlgal, ku talin, oo kor u qaad qiimaha nolosha.
Ku dhufo soo noqoshada adag ee kharashka xayeysiinta (ROAS) bartilmaameedyada adigoo sii deynaya awoodda xogtaada
Ganacsatada App-ka ayaa si buuxda gacanta ugu haya hawlgalladooda xayeysiinta barnaamijyadooda ah iyadoo ay si buuxda u caddaynayaan xogtooda ololaha iyo waxqabadkooda, oo ay ku jiraan xogta muuqaalka heerka aragtida ee aan lala wadaagin barnaamijyada kale ee dhinaca dalabka ah.
Ka bilow MOLOCO Cloud
Tags: isweydaarsiga xayeysiiskaAdColonyaisirdoonka macmaldalab optimizerxayeysiiska xog-wadista ayaa iibsadaFyberin-app shabakadaha xayeysiiskain-app xayeysiintabeegsiga latxaddid bartilmaameedka raadinta xayeysiiskaltvbarashada mashiinkaxalalka xayeysiiskaxayeysiiska barnaamijka moobiilkaxayaysiinta barnaamijka moobiilkaMolocodaruur molocobarnaamij xayeysiisku soo noqo xayeysiintarosasTaabasho
Isku xirnaansho: Ka Faa'iideyso Shabakadaada Si Aad Ugu Xidho Macaamil Dheeraad ah Isbadalkan Sirdoonka Xiriirka iyo Falanqaynta